Seborrheic dermatitis, एक छरितो, अनुहार मा seborrhea - जवान पुस्ता को सबै भन्दा susceptible छ जो एक रोग। सामान्यतया यौवन अवस्था उत्तीर्ण गरे पछि, यो लगभग तुरुन्त, तर यो बीस-पाँच वा तीस वर्ष एक ट्रेस रहनेछ। अनुहार मा seborrhea categorically इन्कार गायब घटनाको, यो एक विशेषज्ञ त्वकरोग भ्रमण गर्न अर्थमा बनाउँछ।
यसलाई कसरी पत्ता छ? यो रोग सधैं त्यहाँ sebum एक overabundance छ जहाँ ठाउँमा अनुवादित छ। यो को अनुहार को चिउँडो मा, नाक र निधारमा को पक्ष। बोसो को सबै भन्दा साधारण प्रकार यहाँ seborrhea देखाइयो। यसलाई उन्नत छाला चम्कने द्वारा विशेषता छ। Pores निकै बढेको छ, र तिनीहरूले कालो प्लग (comedones) देखिन्छन्। यी ठाउँमा छाला को उपस्थिति सुन्तलाको बोक्रा जस्तो। र छाला को रंग फिक्का, grayish बन्नेछ। अनुहार मा Seborrhea यो स्पष्ट र धेरै असहज कस्मेटिक दोष प्रतिनिधित्व किनभने मात्र खतरनाक छ। यसको रासायनिक संरचना परिवर्तन अनावश्यक बोसो यी ठाउँमा liberated। यो जमीन जायदाद, मुखासे र अन्य छाला समस्या को गंभीर जलन कारण छ कि pathogenic जीवाणुहरु को एक विस्तृत विविधता को विकास को लागि आदर्श छ।
केही हदसम्म फरक प्रकट ड्राई seborrhea अनुहार। यो पनि अनुहार, घाँटी र माथिल्लो छाती मा देखा पर्न सक्छन्। यो कारणले गर्दा को कामकाज को कमी गर्न हुन्छ यो वसामय ग्रंथिहरु। असंतुलन हुन्छ। छाला, छील गर्न सुरु यसलाई कुनै न कुनै बन्दछ र यसको प्राकृतिक रंग हराउछ। रोग अलिकति खुजली र सुक्खा सेतो पट्टिका-जस्तो धूलो को उपस्थिति द्वारा विशेषता छ। उपचार समयमा सुरु गरिएको छैन भने, निकै को सुरक्षा कम छाला को समारोह, विभिन्न रोगहरु आफ्नो प्रतिरोध र, फलस्वरूप। को वसामय ग्रंथिहरु को संरचना परिवर्तन। तिनीहरूले छाला moisturize गर्न सक्दैन। भाइरस र Fungi को प्रसार को लागि सबै भन्दा अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्न। विभिन्न कारक को प्रभाव अन्तर्गत तेल र सुक्खा seborrhea व्यक्ति, समय समयमा अर्को एक देखि प्रवाह हुन सक्छ।
उपचार सुरु गर्नु अघि, तपाईं पेट र intestines काम सम्बन्धित रोगहरु को शरीर मा उपस्थिति को लागि जाँच गर्नुपर्छ। antihistamines को Propyl पाठ्यक्रम। यसको मेनु प्रोभोकिंग खाद्य पदार्थ को सबै हटाउन निश्चित हुनुहोस्। यो चकलेट, अन्य मिठाई, नूनिलो र मसालेदार खाना। त्यहाँ अनुहार मा एक seborrhea हो भने, उपचार जटिल हुनुपर्छ। सम्भव ताजा फलफूल र तरकारी रूपमा धेरै आफ्नो दैनिक आहार मा प्रवेश गर्न निश्चित हुनुहोस्। खराब बानी परित्याग। तिनीहरूले तुरुन्तै हाम्रो छाला मा एक धेरै नकारात्मक प्रभाव, त्यसैले रक्सी र धूम्रपान नियम छ।
अनुहार मा Seborrhea होसियार स्वच्छता आवश्यक छ। यसलाई एक विशेषज्ञ को सहायता संग उपकरण को एक सेट छनोट गर्न सबै भन्दा राम्रो छ, तर तपाईं पनि छाला सफाई को परम्परागत विधिहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनुहार शुद्ध पार्नुभएर पछि, ताजा टमाटर लिन आधा मा कटौती र सबै प्रभावित क्षेत्रमा पहिलो आधा र त्यसपछि अन्य RUB। पनि यो शुद्ध गर्न moisturize र ताजा ककडी र बन्दागोभी रस को सुनिंनु निर्मूल गर्न मद्दत गर्छ। यदि तेल seborrhea अनुहार मा, उपचार सल्फर संग nanodiamonds उपयोग गरदै विभिन्न प्रयोग बाहिर गर्न सकिन्छ। यसलाई शुद्ध र wiping बलियो चिया मदिरा सुधार गर्न मद्दत गर्छ। बीस दैनिक compresses को पाठ्यक्रम खर्च। विशेष गरी प्रभावकारी मह र कच्चा आलु, कसा भयो गाजर र कटा लसुन को संयोजन छ। एक विवरण लोशन बनाउन र आफ्नो छाला दैनिक बिहान र साँझ RUB। ताजा ककडी लिन, यो काट्नु, मह थप्न र सबै भन्दा पानी उम्लिरहेको खन्याउन। पूर्ण ठंडा, तनाव, निचोड लागि प्रतीक्षा, एक सुन्दर ठाउँमा सुन्दर बोतल र स्टोर मा खन्याउन। Seborrhea उपचार साँच्चै घ्यु बोट यसको निको गुण लागि लोकप्रिय रस को अनुहार wiping दैनिक मद्दत गर्छ।
यो जटिल प्रक्रिया brewer गरेको खमीर वा बी भिटामिन को स्वागत थप्न अनि जहाँसम्म तनावपूर्ण अवस्थामा जोगिन सकेसम्म प्रयास र भयातुर हुन छैन आवश्यक छ। यो हाम्रो स्नायु प्रणाली वसामय ग्रंथिहरु र ducts को कार्यका लागि जिम्मेवार छ। त्यसैले, यो आफैलाई हेरचाह गर्न आवश्यक छ, बाँकी प्रशस्त प्राप्त र समय खर्च सुखद अनुभव गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
को कारण र उपचार: होंठ मा सेतो डण्डीफोर
के र किन दुखेको बायाँ स्तन को कारण
कसरी बहाना घूम्छ मा र जीवनमा "उड" गर्न पखेटा बनाउने?
Andorra राजधानी - एक असामान्य र सुरम्य शहर
होटल वेज: सेवा र सुविधा